FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Fampaherezana
Fidirana Fotoana FAQ Fifandraisana
Fa ny fanantenana no namonjena ny mino.
Tomoera tsara amin'ny finoana...
Mahereza àry, ka aoka hitombandahy isika.
I Kor 16/13 ; II Sam 10/12
— Main Menu —Fidirana Fotoana	- Programa fiangonana - Programa sampana Soratra Masina	- Toriteny alahady - Toriteny manokana - Fampianaram-pinoana - Mofon’aina - Fandalinana Soratra Masina Mpitandrina Fitaizana	- Biraom-piangonana - Sekoly Alahady - Fifohazana - Lehilahy Kristiana - Dorkasy - Vokovoko Manga - Mpanazava sy Tily - Vondrona Fototra Laika - Tanora Kristiana	- - Feo Mamy - - Akon’ny Paradisa - - Artistika - Sampanasa sy asa	- - Asa Fitoriana ny Filazantsara - - Asa sosialy - Fikambanana	- - Loholona sy Diakona - - Katekomena - - Hafa Fifandraisana
Sampanasa sy asa
Finoana, mahereza, aoka hitombandahy isika
Asa lehibe no apetraky ny Tompo hotanterahintsika amin’izao fananganana ho Trano vato ny Trano fiangonana eto amin’ny F J K M Ankadindramamy Fahazavana izao noho izany :
1. Finoana :
Tarihina isika hanana finoana miorina ao amin’Ilay Andriamanitra Tompon’ny asa. Aza manahy, matokia Azy, apetraho Aminy ny asa dia ho lavorary ny fikasana tsara efa nambarantsika Taminy.
Matetika rehefa misy asa lehibe atao tahaka izao dia mipetraka hatrany ny fanontaniana, eny manahy ny amin’izay hoenti-manana isika amin’ny maha-olombelona antsika. Tsarovy anefa fa an’Andriamanitra ny zavatra rehetra ( Salamo.24 / 1 ). Manana ny ampy ahalavorary ny asany Izy. Isika no nofidiany ho mpiara-miasa Aminy koa mitafy finoana sy fahatokiana Azy dia ho hitanao ny Voninahiny. Aza manahy, Aza mierikerika foana fa mivavaha, Ankino Aminy ny asa dia ho tanteraka ny fikasantsika.
2. Mahereza :
Lehibe ny asa atrehintsika. Maro ny toe-javatra tsy maintsy atrehiny. Noho izany “mahereza”. Izany hoe : asehoy ny herinao, mitafia hery, mangataha hery avy amin’Andriamanitra mba ahafahantsika mijoro hanatanteraka izao asa vavolombelon’ny finoantsika izao.
Tsarovy fa raha mahay mangataka ny Hery avy amin’Andriamanitra isika dia omeny tokoa ny Fanahy Masina izay Heriny mitondra sy mitarika antsika hanao am-pitiavana ny asany. Eny ny Herin’ny Fanahy Masina no mitondra fahavonona, faharetana hatrany hanatanteraka ny fanompoana nifidian’ny Tompo antsika.
Ny olona omen’Andriamanitra Hery dia mahatanteraka tokoa ny asa fanompoana nifidiana azy.
3. Aoka hitombandahy
Miseho ho tena lehilahy vonona hanoa sy hanompo an’Andriamanitra. Raha ny tantara hita ao amin’ny Soratra Masina no dinihina dia nanana anjara toerana, eny nahavita be tokoa tamin’ny asan’Andriamanitra ny lehilahy nofinidin’Andriamanitra .Ry Mosesy , Josoa …. sy ireo Mpaminany maro nitondra ny hafatr’Andriamanitra ho an’ny vahoakany.
Teo koa ny mpianatry ny Tompo, ry Paoly Apostoly. Niseho tokoa, nijoro ho tena lehilahy ka niezaka, niroso hatrany nanatanteraka ny asa nifidianana azy ireny.
Na dia nisy aza ny lalana sarotra nizorana, ady tsy maintsy natrehina. Ny fijoroana ho tena lehilahy voafidin’Andriamanitra no nahatanterahany ny iraka nifidianana azy.
Tarihina ho amin’izany koa isika Fiangonana ankehitriny. Andriamanitra no manafy hery antsika ka tokony “hitombandahy isika”. Aneho eo amin’ny fiainantsika fa mijoro sy miroso hanatanteraka ny asa napetraky ny Tompo isika. Amena
Fananganana Trano Fiangonana trano vato
Tsy misy valiny.
Teny fiarahabana sy firariantsoa
Soraty eto ny hafatrao ho an’ny fiangonana
* Ampidiro ny anaranao
* Azafady mila adiresy mailaka tena izy
* Azafady soraty ny hafatra
Copyright 2014 FJKM Ankadindramamy Fahazavana - Réalisation : Haikajy